Best mkpọchi uwe Pouches Manufacturer na Factory | Guoshengli
Ihe Nkiri Rollstock
Mpempe Akwụkwọ Gusseted
Igbe obere akpa
Ekike obere akpa
Ohiri Isi Pouches
Akụkụ Gusseted Pouches
Atọ Akụkụ Akara Akpa
Ewepụghị Bottom Pouches
Ọ dị mfe imeghe ma dị mfe imechi, mkpọchi mkpọchi bụ ihe magburu onwe ya, nhọrọ nkwụghachi / nhọrọ a na-akwụ ụgwọ maka ọtụtụ ụdị akpa dị iche iche, gụnyere ma obere akpa na obere akpa, na-egbochi mmebi ma ọ bụ na-awụfu. na maka ichekwa ngwaahịa freshness.
Mkpọchi mkpọ ego
Akụkụ ndị ọzọ maka mkpọchi zipa
● Ọ na-agba agba: mfe ịdọka na-enweghị ngwaọrụ
Degassing Valve: nke a na-ejikarị eme ihe maka kọfị kọfị, na-ekwe ka carbon dioxide gbanahụ akpa ahụ n'ekweghị ka oxygen laghachi, na-eme ka ndụ dị ogologo, ezigbo ụtọ na ịdị ọhụrụ.
Window windo doro anya: ọtụtụ ndị ahịa chọrọ ịhụ ọdịnaya nkwakọ ngwaahịa tupu ịzụrụ. Gbakwunye windo transperent nwere ike igosi ngwaahịa mma.
Ezigbo obibi akwụkwọ: agba dị elu na eserese ga-enyere ngwaahịa gị aka ịpụta na shelf mkpọsa. Nwere ike ịhọrọ kenkowaputa transperent ọcha na matte nkwakọ elu ịdọrọ ahịa 'ntị. Ọzọkwa, holographic na glazing technology na dara mmetụta technology ga-eme ka gị na-agbanwe nkwakọ pouches adịchaghị anya.
● Ọdịdị Pụrụ Iche Pụrụ Iche: enwere ike ịkpụ ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọdịdị ọ bụla, ịmị anya ka mma karịa akpa
Hole Ogologo oghere: akpa ndị nwere oghere nwere oghere na-eme ka ha nwee ike ịdokwasị n'ụzọ dị mfe site na nko ha ka e wee gosipụta ha n'ụzọ mara mma.
Nhọrọ ndị ọzọ dị na arịrịọ
Esi tụọ mkpọchi mkpọchi?
Foto ndị ọzọ nke Zipper Pouches
Nke gara aga: Akwụkwọ ego
Osote: Ohiri Isi Pouches
Linyi Guoshengli Nkwakọ Ihe Co., Ltd.